2019 BUDGET: Kedu etu bọjeti siri metụta steeti ndị n'ala Igbo? - BBC News Ìgbò
2019 BUDGET: Kedu etu bọjeti siri metụta steeti ndị n'ala Igbo?
7 Jenụwarị 2019
Amụma mkpata na mmefu ego na-abụkari ihe omume omenafọ nke gọọmenti ọbụla n'emekarị iji gosipụta ndị ha na-achị ọrụ dị iche ha ga-abagide na-afọ ahụ.
Dịka afọ 2019 na-ebiri ọkụ taa, ọtụtụ mmadụ na-atụ anya na gọọmenti steeti dị iche iche ga-agba mbọ itinye amụma mkpata na mmefu ego nke steeti ha dị iche iche n'ọru, iji mee ka ọnọdụ ndị ha na-achị dịkawanye mma.
Ụlọomeiwu ejirila N500bn bulite bọjeti
Akụkọ kachasị n'abalị a: Naịjirịa nọ n'ụzọ agbaruola ihu maka ego e bere na bọjet Ndigbo
BBC Igbo mere nnyocha iji mara ka ọnọdụ mkpata na mmefu nke afọ 2019 na steeti dị iche iche n'ala Igbo siri dị.
Image copyright Ebonyi state Government/Facebook
Nkenke aha onyonyo Dave Ụmahị, Gọvanọ Ebonyị steeti
Dịka onye Kọmịshọna na-ahụ maka ego na steeti Ebonyị bụ Obinna Nwachukwu siri kwuo, Gọvanọ Dave Ụmahị e binyela aka ka ọbụrụ iwu, na bọjetị nke steeti ahụ pụtara Otu Ijeri narị naịra na Iri asatọ na-asatọ na ụma isii (N188.6b) n'ụbochị iri abụọ na anọ nke ọnwa Disemba, 2018.
Image copyright Enugu state govt/fb
Nkenke aha onyonyo Ifeanyi Ugwuanyi, Gọvanọ Enugu steeti
Na steeti a ka anyị nwetara akụkọ na mkpata na mmefu ego nke steeti ahụ pụtara Otu Ijeri narị naịra na Itoolu (N109b) ka bụkwa nke nọ n'ụlọ omeiwu steeti ahụ dịka Kọmịshọna steeti ahụ bụ Eucharia Ọfọ siri kwuo.
Image copyright Abia state govt/fb
Nkenke aha onyonyo Okezie Ikpeazụ, Govanọ Abịa steeti
Dịka akụkọ si Enugu siri kwuo, gọọmenti steeti a ka na-ele anya na ndị ụlọ ọgbakọ omeiwu nke Abịa steeti ga-eleba anya na amụma mkpata na mmefu ego nke 2019, pụtara Otu Ijeri narị naịra na iri atọ na itoolu (N139b) na mgbe adịghị anya.
Bọjeetị Naịjirịa ọ ga-apụta n'ọnwa a?
Bọjetị 2018: 'Buhari chọro iji ihe a ghọgbuo ndị Igbo'
Nkenke aha onyonyo Rochas Okorocha, Gọvanọ Imo steeti
Mgbe BBC Igbo kpọrọ onye Kọmịshọna steeti ahụ na-ahụ maka ego bụ Oriakụ Ugochi Nnanna-Okoro, ọjụwara isi inye nkọwa gbasara ọnọdụ mkpata na mmefu ego nke steeti ahụ nke afọ 2019.
Image copyright Anambra state govt/fb
Nkenke aha onyonyo Willie Obianọ, Gọvanọ Anambara steeti
Mbọ niile BBC Igbo gbara ịkpọtụrụ onye Kọmịshọna na-ahụ maka ego na steeti ahụ bụ Ifeatụ Onejeme, n'ekwe ntị, bụ nke kụrụ afọ n'ala n'ihi na ọzaghị oku ekwe ntị ya.
Mwakpo ndị agha mere megide Daily Trust ezighi ezi n'ọchịchị ọhakarasị--Eddie Iroh
Ọ bụ eziokwu na Ebonyi esoghi na Biafra?
Akụ na ụba
Akụkọ Mere Ugbua - Kobe Bryant anwụọla na mkpọkasị ụgbọelu
'Ọnwụ nna m bịara dị ka ngọzị nye m'- Chris Okagbue
Manchester United azaala 'Nna m agụ' taa
Copyright © 2020 BBC. BBC anaghị ahụta maka ọdịnaya nke saịtị ndị dị na mpụga. Usoro anyị maka njikọ dị na mpụga.